Mushure memakore maviri ebudiriro kunouya Kodi 18 Leia | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Kuvhurwa kwenzvimbo inozivikanwa kwazvo yakavhurwa midhiya, Kodi 18.0, kwakaziviswa, iyo yakambogadzirwa pasi pezita XBMC.
Kubva yazvino vhezheni, dzinenge gumi zviuru shanduko dzakaitwa kune kodhi base, kusanganisira mazana mazana mashanu emitsetse yekodhi nyowani yakawedzerwa, plus nyowani maficha uye kugadzirisa bug.
1 Chii chitsva muKare 18?
1.1 Pakupedzisira DRM rutsigiro runosvika
1.2 Zvishandiso zvakagadzirwazve
1.3 Yakagadziridzwa Live Live rutsigiro
1.4 Zvimwe zvitsva
2 Ungawana sei Kodi 18?
Chii chitsva muKare 18?
Imwe ye iwo makuru matsva ayo akaburitswa mune beta vhezheni ye Kodi, ibasa revagadziri muchikamu nemitambo kune graphical interface izvo zvinokutendera iwe kumhanyisa akasiyana siyana ekushandisa emitambo, kusanganisira kushandisa emulators uye mainjini emitambo anowanikwa muLibretro.
Iyo hombe muunganidzwa we retro mutambo emulators inowanikwa yekumisikidza uye yekumisikidza inopihwa kumisikidza akasiyana emitambo consoles, joysticks uye mutambo vatongi.
Zve Linux, Tsigiro inopihwa Wayland uye Mir inoratidzira server. Yakagadziridzwa rutsigiro rweOpenGL ES, EGL, VAAPI, VDPAU (NVIDIA) uye XvBA (AMD).
Wakawedzera kugona kushanda nemadhiraivha e DRM / KMS uye shandisa V4L2 kuti ikurumidze kutamba kwevhidhiyo.
Pakupedzisira DRM rutsigiro runosvika
Imwe yemitambo mitsva yaitarisirwa mukuburitswa kutsva iyi DRM rutsigiro (Dhijitari Kodzero Management) izvo inopihwa kuburitswa zviri pamutemo kwemakopi-akachengetedzwa zvemukati.
Nokubatanidza ekunze maCDM module (Zvemukati Dhijitari Module), kudhizaisa zvemukati zveC DRM, Kodi ikozvino inogona kushandiswa kuwana zvemukati zvakabhadharwa zvinopihwa nevapi vakasiyana
Mune ino nyowani Kodi kuburitswa, vagadziri vakatadza kupotsa chishandiso revamp iyo Kodi inotipa, pakati payo mimhanzi, pamwe nemidziyo yakawedzerwa yekusefa nekuisa zvemukati (nekwakabva, mhando, mhando, muimbi, nezvimwewo) zvakagadziridzwa.
Yakagadziridzwa Live Live rutsigiro
Zvakare zvinogona kucherechedzwa kuti rutsigiro rweRDS rwakawedzerwa (Radio data system), otomatiki kusarudzwa kweredhiyo / chiteshi panguva yekutanga.
Enhanced PVR modhi (kutarisa mhenyu TV, kuteerera Internet radio, kushanda neyemagetsi chirongwa gwara uye kuronga vhidhiyo kurekodha pane zvakarongwa hwaro. Nyowani Zattoo, Teleboy uye Sledovanitv.cz backends akawedzerwa.
Pane mamwe matsva atinogona kuwana ndeaya yakawedzera rutsigiro rwekubatanidza mapulagini emabhinari uye dura reakagadzirira-kushandisa-plugins akaunganidzwa kune mamwe mapuratifomu.
Zvinhu zvakawanda (VFS, codecs, decoders, nezvimwewo), zvakambopihwa mukuumbwa kwekutanga, zvinosanganisirwa muma plugins, izvo zvaibvumidza tsamba kutema saizi yeiyo inosimudza nehafu.
Iko shanduko kune modular akitekicha yakaitwa, iyo inobvumidza kuwedzera nyowani mhando dze processors uye zvemukati zvinyorwa.
Iwo plugins mune repository anounganidzwa chete eApple, macOS uye Windows uye yeLinux.
Yakawedzerwa iko kugona kwekutarisa iyo yemukati raibhurari kubva kune huru interface yeApple TV zvishandiso uchishandisa izwi kudzora uye izwi rekuisa (pachinzvimbo che-on-screen keyboard).
Tsigiro yekutamba vhidhiyo uye odhiyo zvemukati zvakawedzerwawo.
Chekupedzisira, chimwe chezvinhu chinogona kusimbiswa kutsigirwa kwemakodhi matsva uye michina yekumhanyisa yehurdware.
Izvo zvakapa mhando yepamusoro kugadzirisa kweHDR uye 4K / 8K resolution. Yakagadziridzwa Blu-ray rutsigiro, kusanganisira chaiyo disc disco, kuverenga metadata, BD-J menyu rutsigiro, uye kugona kugadzirisa 3D vhidhiyo uye stereoscopic kuburitsa.
Iwo macodec anowirirana neFFmpeg 4.0. Yakagadziridzwa rutsigiro rwe ALSA, PulseAudio, OSS, Pi Audio, DirectSound, WASAPI, Darwin, uye SndIO odhiyo masisitimu.
Ungawana sei Kodi 18?
Iwo ekuisa mapakeji eiyi vhezheni nyowani anowanikwa kune macOS (x86, PPC), FreeBSD, Linux (ARM, PPC, x86 uye x86-64), Raspberry Pi, Android (ARM, x86), Windows, Apple TV uye iOS.
YeUbuntu, PPA repository inopihwa.
Unogona kuwana iyi vhezheni itsva kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mushure memakore maviri ebudiriro kunouya Kodi 18 Leia